Maxkamadda sare: dacwo dib loo furay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkamadda sare: dacwo dib loo furay
Dacwada Kaj Linna
Publicerat torsdag 29 december 2016 kl 13.52
Kaj Linna oo sanaddii 2004 tii lagu xukumay xabsi daa’in, ka dib markii uu gaystay dembiyo isugu jira dil iyo dhac ayaa la ogolaaday in mar kale keyskiisa dib loo furo, sida ay shaacisay maxkamadda sare maanta.
12 sano ayuu Kaj Linna ku xukunnaa xabsi daa’in, ka dib markii maxkamaddu ku heshay inuu gaystay dil arxan darro ah sannadkii 2004-tii. Maxkamadda sare ayaa iminka ogolaatay in keyskiisa dib loo furo, waxaana uu weligiisba ku adkaysanayay inaanu isagu wax dembi ah gelin.
– Waa arrin lagu farxo, mar kasta tani waxa ay noo ahayd himilo aan ku taamaynay- qofna kuma jiri karo caloolyow, keyskanina waxa uu markiisii horeba ahaa mid ayaan darro ah, ayuu yidhi Thomas Magnusson oo ah qareenka u doodaya Kaj Linna.Bishii april sanadkii 2004-tii ayay ahayd markii laba nin oo walaalo ahaa weerar arxan darro loogu gaystay Kalamark oo in yar ka durugsan magaalada Piteå ee woqooyiga Sweden. Mid ka mid ahaa labada nin ayaa isagu u geeriyooday dhaawcyadii kasoo gaadhay weererka, halka ka kalena uu si xun u dhaawacmay.
Waa markii saddexaad ee uu Kaj Linna maxkamadda ka dalbado in kayskiisa dib loo eego, maxkamadduna markan waa ay u ogolaatay. Dib u eegistan ayay maxkamaddu u cuskatay markhaatigii oo sheegay warar burinaya ama ka soo horjeeda kuwii uu markii hore maxkamadda ka sheegay.
Kaj Linna ayaa isagu dafiray dacwada lagu soo oogay, hase ahatee waxa ay maxkamaduu xukunkiisa u cuskatay markhaati maxkamadda horteeda ka sheegay inuu maqlayay Kaj Linna oo leh – ”waxa aan ku tala jiraa inaan laayo labada nin oo walaalaha ah”
Isla sannadkaas ayaa maxkamadda sare ay xabsi daa’in ku xukuntay Kaj Linna.
– Waxa ay maxkamaddu u aragtaa inay jirto sabab macquul ah oo keyskan dib loogu furi karo, taasina waxa weeye iyadoo uu markhaatigii sheegay xog ka duwan tii markii hore uu maxkamadda ka sheegay. Taasina waa sababta maxkamaddu go’aankan u cuskatay, ayuu yidhi Anders Eka oo ka tirsan guddiga caddaaladda.
Go’aankan ayaa macnihiisu noqonayaa in dacwada Kaj linna ay maxkamadda rafcaanka ee woqooyiga Sweden mar kale dib u eegto soona baarto in Kaj Linna uu dembiga galay iyo in kale.